भावनात्मक रूपमा कमजोर व्यक्तिमा स्मार्टफोनको लत ! | गृहपृष्ठ
Home र यो पनि भावनात्मक रूपमा कमजोर व्यक्तिमा स्मार्टफोनको लत !
on: March 25, 2018 र यो पनि
भावनात्मक रूपमा कमजोर व्यक्तिमा स्मार्टफोनको लत !
भावनात्मक रूपमा कमजोर र तनावबाट पीडित व्यक्ति स्मार्टफोनको लतमा फस्न सक्ने एक नयाँ अध्ययनले देखाएको छ । बेलायतस्थित युनिभर्सिटी अफ डर्बी र नटिङ्घम ट्रेण्ट युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताले गरेको अनलाइन अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । उनीहरूले स्मार्टफोनको प्रयोग र व्यक्तिगत स्वभावबीचको सम्बन्धबारे पत्ता लगाउन १३ देखि ६९ वर्ष उमेर समूहका ६ सय ४० जना स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताबीच अध्ययन गरेका थिए । मानसिक स्वास्थ्यसँग कमजोर रहेका व्यक्तिमा स्मार्टफोनको लत हुने अध्ययनमा पाइयो । त्यस्ता व्यक्तिले स्मार्टफोनलाई थेरापीका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन् ।
जो व्यक्ति जति कम होशियार र पीडा सहन नसक्ने छ उसमा स्मार्टफोनको लत लाग्ने सम्भावना उत्तिकै बढी हुने अनुसन्धानले देखाएको छ । त्यस्तै, मानिसमा तनावको स्तर जति धेरै बढ्छ उनीहरूको स्मार्टफोन प्रयोग पनि त्यति नै बढ्ने अध्ययनले देखाएको छ । ‘अधिकांश व्यक्तिको दैनिक जीवनको अत्यावश्यक वस्तु बनेको स्मार्टफोनका हाल विश्वमा ४ अर्ब २३ करोडको सङ्ख्यामा प्रयोगकर्ता रहेका छन्,’ युनिभर्सिटी अफ डर्बीका लेक्चरर जाहिर हुशेनले भने ।
यसैक्रममा, आफ्ना भावनाहरू गुम्स्याएर राख्ने र त्यसलाई उजागर नगर्ने मानिसले पनि स्मार्टफोनको प्रयोग बढी गर्ने गरेको अध्ययनमा पाइएको छ । आफ्नो जीवनमा तनाव, डिप्रेशन, पारिवारिक समस्या आदि भोगिरहेका मानिस भावनात्मक रूपमा स्थिर नहुने र उनीहरूले स्मार्टफोनको अत्यधिक प्रयोगमा नै शान्ति खोज्ने गरेका कारण यस्तो समस्या देखिएको अध्ययनमा बताइएको छ । यो चिन्ताजनक अवस्था रहेको अनुसन्धानकर्ता बताउँछन् । रासस/पीटीआई